अस्पतालमा के भयो?
Friday, 01 June 2012 02:10	नागरिक
दीपक दाहाल-शरीरका महत्वपूर्ण अंगहरूमा गोली लागेर अचेत अवस्थामा करिव सवा १२ बजे अस्पताल पुर्‍याउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बममा पीडाको छटपटी बाँकी नै थियो। तुलनात्मक रूपमा घटनापछि समयमै अस्पताल पुर्‍याउन सकेको हुनाले चिकित्सकहरूमा झिनो आशा थियो, सुधार्न सकिन्छ कि भन्ने।
तत्कालै चिकित्सकहरूले शल्यकक्षमा लगेर एनेस्थेसिया दिए। अस्पतालमै रहेका वरिष्ठ जनरल सर्जन डा.प्रविण नेपालका अनुसार न्यायाधीश बमको शरीरका ७ ठाउँमा गोलीका गहिरो निसानी थियो। चिउँडो, घाँटीको रुद्रघन्टी, छातीका ३ ठाउँ क्षतविक्षत थियो। छातीनजिकैका कोखा र हातका औंलाहरूमा गहिरो चोट थियो। अवस्था बुझ्न हतारिँदै अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई चिकित्सकहरूले निराशामिश्रित प्रतिक्रिया दिइसकेका थिए।
एनेस्थेसियापछि भिडियो एक्स-रे तथा एक्स-रे गर्दा छाती पूर्णतयाः रगतले भरिएको पाइयो। 'रक्तचाप र नाडी शुन्यप्रायः थियो,' डा.नेपालले भने, 'सिधै शल्यक्रिया कक्षमा पुर्‍याएर ज्यान जोगाउने उपायहरूमा बन्द मुटु र फोक्सोलाई चलाउन व्यवस्थित ढंगले थिचिने विधि (कार्डियाक पल्मोनरी रिसाइटेसन सिपिआर) गरियो।'
उनले थपे, 'सँगै जमेको रगत निकाल्न छातीको दाहिनेतर्फ चेस्ट ट्युब राखी श्वासप्रश्वास, रक्तचाप र नाडीको गति सुधार्ने प्रयास गर्दासमेत नाडीको गति र रक्तचापमा सुधार आएन र सबै प्रयास विफल भएको निष्कर्ष हामीले निकाल्यौं।'
'बन्द मुटु चलाउन १ घन्टाको प्रयास निरर्थक भयो,' १ बजेर ३१ मिनेटमा नागरिकलाई अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले एसएमएसमार्फत भने, 'रगतका मुख्य नसामा लागेको गोलीका धेरै चोटका कारण अत्यधिक रक्तश्राव भएको रहेछ, हामीले उहाँलाई बचाउन सकेनौं।' उपचारमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रावत, अर्थोपेडिक सर्जन नेपाल, न्युरो सर्जन प्रविण श्रेष्ठ, वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ रमेश चोखानी, जनरल सर्जन राजेन्द्र रेग्मी र सर्जनहरू डा. राज राणा, डा. प्रिस्का बाँस्तोला र डा. विदुर बरालको टिम थियो।
बमसँगै रहेका उनका मित्र राम (प्रदीपराज गिरी) र सुरक्षा अधिकृत महेश गिरीको अवस्था पनि गम्भीर भएको अस्पतालले जनाएको छ। कलाकार दीपकराज गिरीका पिता रामलाई सुरुमा भरोसा र अल्का अस्पताल पुर्‍याएर करिब १ बजे नर्भिक लगिएको थियो। डा.नेपालका अनुसार कोखाबाट छिरेको गोलीले पेटका नसा फुटाएर पाँच ठाउँमा चोट र सम्पूर्ण आन्द्रालाई समेत क्षतविक्षत बनाएको छ। त्यो गोली पेटको दाहिनेतर्फको मांसपेसीमा अड्किएको थियो। शल्याक्रिया सफल भए पनि उनको अवस्था खतरामुक्त छैन। नेपालका अनुसार कृत्रिम श्वासप्रश्वासमा रहेका उनको होस आएपछि पनि सहज रूपमा खानाको पाचन नभएसम्म अवस्था के हुन्छ, भन्न सकिन्न।
सुरक्षा अधिकृत महेश गिरीको शल्यक्रिया कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जन
डा. रविन्द्र तिमिलाले गरेका थिए। महेशको घाँटीको रगत बग्ने नसा गोलीले क्षतविक्षत भएकाले त्यहँ खुट्टाको नसा प्रत्यारोपण गरिएको छन्। कृत्रिम श्वासप्रश्वासमै राखिएका उनको अवस्थाबारे २४ घन्टापछि मात्र भन्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ।
डा.रावतले घाइते अवस्थामा रहेका दुवैको रक्तचाप र रगतमा अक्सिजनको मात्रा ठिकै भएको जानकारी दिए। महेशको हातको समेत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए पनि खतरामुक्त भएपछि मात्र सो शल्याक्रिया गरिनेछ।